WWDC vhiki, iMac Pro, HomePod uye nezvimwe. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac | Ndinobva mac
WWDC vhiki, iMac Pro, HomePod uye nezvimwe. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac
Vhiki rino hapana mubvunzo rakamisikidzwa neshoko reApple rakaitirwa kuMcEnery Convention Center muSan Jose, Muvhuro wapfuura, Chikumi 5. Kubva kusimbiswa kwepamutemo naApple nezveWWDC keyword, runyerekupe nekudonha hazvina kumira kusvika nezve zvatingaone uye nezvisingaite, ikozvino kiyi yakakosha yapfuura uye misangano inoitirwa vashanduri mumazuva anotevera futi. Muvhiki rese takaona yakanaka yakanaka mawoko mune iyo Mac renji, nyowani 10,5-inch iPad Pro uye kunyanya iyo HomePod mutauri wekumba wakagadzirwa neApple iyo ine A8 processor mukati. Kuwedzera kune ese akavandudzwa uye nyowani Hardware isu takaona zvakare kuvandudzwa mu MacOS Yakakwira Sierra, iOS 11, watchOS 4, uye tvOS.
Saka tinoenda nezvikamu uye sezvo isu tine chokwadi chekuti vazhinji veavo varipo vanoziva nhau dzakapihwa nevakomana kubva kuCupertino mu gore rino WWDC, Takatanga nechipo chekuda kuziva uye chepakutanga chakaitwa naApple kune vaipinda, a Bhachi raRevai rakagadzirirwa chiitiko uye mapini.
Pamusoro peMacs matsva tinogona kuratidza iMac Pro, chikara chaicho cherudzi rwayo uye nekure simba rakanyanya desktop Apple nhasi. Ichi chishandiso ndechevanyanzvi uye hwaro hwekumisikidza hunotangira pa $ 4.999, saka hatitombodi kufungidzira iyo ine simba kwazvo modhi. Ehezve, isu takatarisana nekombuta iyo ine hutsinye hwakatsanangurwa.
Kana chiri chigadzirwa chitsva chakapihwa naApple, iyo Pamba Pamba, tinogona kutaura kuti tinonyatsoifarira. Maonero ekutanga akanaka uye mutengo unogona kunge uri iro chete dambudziko rechikamu chikuru chevashandisi asi chero munhu anonzwisisa uye otenga aya marudzi evatauri anoziva kuti haana kunyatsodhura.
Pakupedzisira hatigone kuisa parutivi yedu macOS Yakakwira Sierra. Izvi vhezheni itsva yeiyo inoshanda sisitimu yeMac Yatove mumaoko evakagadziri uye isu munguva pfupi tichava neruzhinji beta vhezheni inowanikwa kune avo vanoda kuyedza uye kuona ese matsva maficha akawedzerwa. Pawebhu iwe unowana rwumwe ruzivo nezve zvakaitika neMuvhuro wapfuura, Chikumi 5, sezvo paine nhau zhinji nezveWWDC, Hardware uye software yakapihwa naApple.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » WWDC vhiki, iMac Pro, HomePod uye nezvimwe. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac
Iko MacBook nyowani iri rig yemabasa anodikanwa?
Solution kana yako Apple Watch isingakuudze iwe nguva yakataurwa naMinnie naMickey